Ungaitei Kuti Urarame Nekusingaperi? (1 Johani 2:17)
SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Alur Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Baoule Batak (Toba) Bislama Cambodian Catalan Cebuano Chavacano ChiHmong (chinonzi cheWhite) ChiTetun Dili Chichewa Chin (Hakha) Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese (Yunnanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Croatian Czech Danish Dutch Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Georgian German Greek Greenlandic Gun Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Jamaican Creole Japanese Kamba Kannada Kikaonde Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwanyama Kyangonde Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Malagasy Malay Malayalam Maltese Mambwe-Lungu Moore Mutauro Wemasaini wokuBrazil Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Pennsylvania German Persian Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Quichua (Chimborazo) Romanian Russian Samoan Sango Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Seychelles Creole Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Sunda Swahili Swati Swedish Tagalog Tatar Telugu Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Urdu Urhobo Uruund Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venda Vietnamese Welsh Xhosa Yoruba Zapotec (Quiatoni) Zulu
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Ungaitei Kuti Urarame Nekusingaperi?
Bhaibheri rinovimbisa kuti: “Munhu anoita kuda kwaMwari anorarama nekusingaperi.” (1 Johani 2:17, Bhaibheri Dzvene MuchiShona Chanhasi) Mwari anoda kuti uite sei?
Dzidza nezvaMwari neMwanakomana wake, Jesu. Jesu akanyengetera kuna Mwari achiti: “Kuti vawane upenyu husingaperi, vanofanira kuramba vachiwana zivo pamusoro penyu, imi Mwari wechokwadi chete, uye pamusoro pouya wamakatuma, iye Jesu Kristu.” (Johani 17:3) “Kuwana zivo” pamusoro paMwari naJesu kunosanganisirei? Tinogona kuvaziva kana tikadzidza Bhaibheri uye tikashandisa zvarinotaura muupenyu hwedu. * Bhaibheri rine pfungwa dzeMusiki wedu, Jehovha Mwari, uyo anopa upenyu. (Mabasa 17:24, 25) Bhaibheri rinotiudzawo nezveMwanakomana wake, Jesu, uyo akadzidzisa “mashoko oupenyu husingaperi.”—Johani 6:67-69.
Iva nekutenda muchibayiro chakapiwa naJesu. Jesu akauya panyika “kuzoshumira nokupa mweya wake kuti uve rudzikinuro mukutsinhana nevazhinji.” (Mateu 20:28) Kufirwa kwatakaitwa naJesu kwakaita kuti vanhu vave nemukana wekurarama nekusingaperi panyika. * (Pisarema 37:29) Jesu akati: “Mwari akada nyika kwazvo zvokuti akapa Mwanakomana wake akaberekwa ari mumwe oga, kuti munhu wose anotenda maari arege kuparadzwa asi ave noupenyu husingaperi.” (Johani 3:16) Saka pane zvimwe zvatinofanira kuita kunze kwekungotenda muna Jesu. Tinofanira kuratidza kuti ‘tinotenda maari,’ tosarudza kurarama zvinoenderana nedzidziso dzake uye nekuda kwaBaba vake.—Mateu 7:21; Jakobho 2:17.
Vaka ushamwari hwakasimba naMwari. Mwari anoda kuti tiswedere pedyo naye tova shamwari dzake. (Jakobho 2:23; 4:8) Mwari haafi, uye anoda kuti shamwari dzake dziraramewo nekusingaperi. MuShoko rake, Mwari anovimbisa vese vanomutsvaka kuti: ‘Raramai nekusingaperi.’—Pisarema 22:26.
Mafungiro Asiri Iwo Panyaya Yekurarama Nekusingaperi
Mafungiro asiri iwo: Zviri kuitwa nevanhu ndizvo zvichaita kuti vanhu vararame nekusingaperi.
Chokwadi: Kunyange zvazvo vanoita zvekurapa vachivimbisa kuti vachaita kuti vanhu vararame kwenguva yakati rebei, izvozvo hazvizoiti kuti vanhu vararame nekusingaperi. Mwari chete ndiye ega anogona kutipa upenyu husingaperi, nekuti ndiye chete “tsime reupenyu.” (Pisarema 36:9) Anovimbisa kuti “achaparadza rufu nokusingaperi” opa vanhu vese vakatendeka upenyu husingaperi.—Isaya 25:8; 1 Johani 2:25.
Mafungiro asiri iwo: Haasi marudzi ese evanhu achararama nekusingaperi.
Chokwadi: Mwari haasaruri. Bhaibheri rinoti “murudzi rwose munhu anomutya uye anoita zvakarurama anogamuchirwa naye.” (Mabasa 10:34, 35) Vanhu vemarudzi ese uye vetsika dzese vanoteerera Mwari vanogona kurarama nekusingaperi.
Mafungiro asiri iwo: Kurarama nekusingaperi hakunakidze.
Chokwadi: Upenyu husingaperi chipo chinobva kuna Mwari anotida uye anoda kuti tifare. (Jakobho 1:17; 1 Johani 4:8) Anoziva kuti tinofanira kuita basa rinogutsa kuti tifare. (Muparidzi 3:12) Mwari anovimbisa kuti vaya vachararama nekusingaperi panyika vachaita basa rinogutsa richabatsira ivo nehama dzavo.—Isaya 65:22, 23.
Vaya vachararama nekusingaperi vacharamba vachidzidza zvinhu zvitsva nezveMusiki uye zvinhu zvakawanda zvaakasika. Akasika vanhu vaine chido chekurarama nekusingaperi kunyange zvazvo vasingazokwanisi kunzwisisa “basa rakaitwa naMwari wechokwadi kubvira pakutanga kusvikira pakupedzisira.” (Muparidzi 3:10, 11) Saka vanhu vachararama nekusingaperi vacharamba vaine zvinhu zvitsva zvekudzidza uye zvekuita.
^ ndima 2 Zvapupu zvaJehovha zvinodzidzisa vanhu Bhaibheri zvisingabhadharisi. Kana uchida kunzwa zvimwe, ona vhidhiyo inonzi Zvidzidzo zveBhaibheri Zvinoitwa Sei?
^ ndima 3 Ona nyaya inoti “Jesu Anoponesa Sei?”
Upenyu Uye Rufu Mibvunzo yeBhaibheri Inopindurwa Kuva Nekutenda Muna Mwari Kutenda Muna Mwari
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Ungaitei Kuti Urarame Nekusingaperi?
ijwbq nyaya 147